Makuki mafaera ane zvidimbu zveruzivo zvinoridzwa kubva mudziyo wako paunoshanyira webhusaiti.
Ivo vanobatsira webhusaiti kuziva nemusoro ruzivo nezve iko kushanya kwako, senge mutauro wako waunofarira uye mamwe marongero. Izvi zvinogona kuita kuti kushanya kwako kunotevera kuve nyore uye kuita kuti webhusaiti ibatsirwe zvakanyanya kwauri. Makuki anoita basa rakakosha. Pasina ivo, kushandisa webhu kungave kuri kushungurudza zvakanyanya. Cookies inowedzera kushanda kwewebhu webhusaiti. Chokwadi iwe wakato wedzera chinhu kumutengo wekutenga muchitoro chepa online, uye mushure memazuva mashoma, pawakadzokera kune webhusaiti, wakawana here kuti chinhu icho chaive uchiri mungoro yako? Iyi ndeimwe yemuenzaniso wekushandisa kuki.
Nei makuki achishandiswa?
Iko kushandiswa kwemakuki pane internet zvakajairika uye hazvikuvadzi vese vashandisi makomputa. Makuki anoita mabasa akati wandei, kusanganisira kubatsira varidzi vewebsite kuti vanzwisise kuti iri kushandiswa sei nekupa kufamba kwavo, kusanganisira kuchengetedza zvavanoda uye kazhinji kuvandudza ruzivo rwavo rwevashandisi uye zvakare kuve nechokwadi chekuti webhusaiti inokuratidza yakakodzera zvirimo.
Imhando ipi yemakuki yatinoshandisa?
Yedu saiti inoshandisa aya anotevera marudzi emakuki: Mvumo yekusingaperi - Aya makuki anochengeterwa padanho rebrowser pane ako ekushandisa zvishandiso (pc, nhare, uye piritsi) uye anoshandiswa pese paunoshanyazve imwe yemawebhusaiti edu. Session cookies - Aya emakuki echinguvana anoramba ari mubrowser yako cookie faira iwe uchisiya webhusaiti. Irwo ruzivo rwakawanikwa nemakuki aya runoshanda kuongorora maitiro emawebhu, anotibvumira kuona matambudziko uye nekupa zviri nani kubhurawuza chiitiko.